कांग्रेस र वाम गठबन्धनकाे अन्तिम रस्साकसी
मंसिर १८, काठमाण्डौँ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको मतदान हुन ३ दिन मात्रै बाँकी छ ।
अब चुनिने नेतृत्वले संघीय शासन प्रणालीअनुसार मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउने भएकाले त्यसका लागि प्रमुख दलहरुको अन्तिम रस्साकसी जारी छ । कांग्रेसले राप्रपालगायत दलहरुसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ भने एमाले र माओवादीसहितका दलले वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । दुवै गठबन्धन अबको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
मतदानको पूर्वसन्ध्यामा यी दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका मुख्य नेताहरु के भन्छन् र चुनावपछिको राजनीतिक बाटो कता जाला भन्ने जान्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कान्तिपुर संवाददाताहरु चित्रांग थापा र डीआर पन्तले धनगढीमा तथा वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग माधव घिमिरे, लीलाबल्लभ घिमिरे र अर्जुन राजवंशीले झापाको दमकमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
देउवा : कांग्रेसको बहुमत आउँछ
केपी ओली :
‘दुई तिहाइकै आसपास पुग्छौं’
उहाँहरूले गौदानका लागि एउटा बनाउनुभएको छ– दक्षिणपन्थी गठबन्धन । सरकारमा जान होइन, चुनाव लड्न होइन, सत्तामा जान होइन । गौदान गर्ने, मन्दिरमा जाने, पूजाको थाली लिएर जाने, दानदक्षिणा गर्ने, बाटामा बस्ने । अक्षय तृतीयामा जस्तो सर्वत र सातु खुवाउने । पुण्य कार्यका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको छ, हामीले चुनावका लागि गरेका हौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ होइन ? अब…त्यो स्तरमा त के छलफल गर्नु ?
प्रधानमन्त्री कत्रो ठूलो कुरो हो भन्या… । मुलुकको नेतृत्व एमालेले गर्छ । त्यति भए भइगो नि ।
मान्छेहरूले त्यस्तै हल्ला गर्छन् । तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ ? अँ, मैले पनि सुनेको छु, त्यो कुरा । ६० प्रतिशतको जुन हिस्साको कुरा छ, त्यसले पनि एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने त देखिएकै छ ।